भगवानको विज्डम, विश्वव्यापी चर्च अफ गॉड स्विजरल्याण्ड (WKG)
नयाँ नियममा प्रेरित पावलको एउटा प्रमुख पद छ ग्रीसका लागि ख्रीष्टको क्रूसलाई मूर्खता र यहूदीहरूका लागि उपद्रवको कुरा गर्छन् (१ कोरिन्थी १:२:1) । यो बुझाउन सजिलो छ कि उसले किन यस्तो भनाइ गर्दछ। युनानीहरूका अनुसार परिष्कार, दर्शन र शिक्षा उच्च स्थानमा थिए। क्रूसमा टाँगिएको व्यक्तिले कसरी सबै कुरा जान सक्छ?
यो एक विलाप थियो र यहूदी दिमाग स्वतन्त्र हुनको लागि इच्छा थियो। उनीहरूको इतिहासभरि उनीहरूमाथि असंख्य शक्तिहरूले आक्रमण गरे र कब्जा गर्ने शक्तिहरूले अक्सर अपमान गरे। चाहे अश्शूरहरू, बेबिलोनीहरू वा रोमीहरू, यरूशलेम बारम्बार लुटिएको थियो र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई घरबारविहीन बनाइयो। हिब्रूले आफ्नो कारणको ख्याल गर्ने र शत्रुलाई पूर्ण रूपमा लड्न सक्ने भन्दा बढि केको आशा गर्न सक्छ र? क्रूसमा टाँगिएको एक मसीहलाई कसरी कुनै सहयोग हुन सक्छ?
क्रस ग्रीकहरूको लागि मूर्खता थियो। यहूदीहरूको लागि यो एउटा उपद्रव, ठेस लाग्ने ठाउँ थियो। ख्रीष्टको क्रूसको बारेमा के त्यहाँ छ, जब त्यसले शक्तिलाई उपभोग गर्ने सबै कुराको दृढ विरोध गर्‍यो? क्रूसीसन अपमानजनक, लज्जास्पद थियो। यो यति अपमानजनक थियो कि यातनाको कलामा पोख्त रोमीहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई ग्यारेन्टी दिए कि रोमीलाई कहिले क्रूसमा टाँगिनेछैन। उनी अपमानजनक मात्र थिइन, उनी पनि पीडादायी थिइन। वास्तवमा, अ word्ग्रेजी शब्द (पीडादायी) दुई ल्याटिन शब्दहरूबाट आएको छ: "एक्स क्रूसियटस" वा "क्रसबाट"। क्रूसीफाइलस सतावटको लागि खास शब्द थियो।
के त्यसले हामीलाई रोक्दैन? याद गर्नुहोस् - अपमान र पीडा।यस तरिका येशूले हाम्रो उद्धार हातको लागि हामीलाई पुग्न रोज्नुभयो। तपाईले देख्नुहुन्छ, हामी पापलाई के भन्छौं, तर के हामीले दुर्व्यवहार गरेर तुच्छ हो भन्ने कुराले हाम्रो सृष्टिको मर्यादा तोडछ। यसले हाम्रो अस्तित्वलाई अपमान र हाम्रो अस्तित्वमा दु: ख ल्याउँछ। यसले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्दछ।
दुई हजार वर्ष अघि गुड फ्राइडेमा, हामीलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र हाम्रो प्राणलाई निको पार्ने गरिमामा फर्काउनको निम्ति येशूले अत्यन्त अपमान र पीडा भोग्नुभयो। के तपाइँ सम्झनुहुन्छ कि यो तपाइँको लागि गरिएको थियो र तपाइँ तपाइँको उपहार स्वीकार गर्नुहुन्छ?
त्यसोभए तपाईंले पाउनुहुनेछ कि यो पाप हो, मूर्खता हो। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बाहिरी शत्रु होइन, तर भित्रबाट शत्रु हो। यो हाम्रो आफ्नै कमजोर इच्छाले हामीलाई ठेस पार्छ। तर येशू ख्रिष्टले हामीलाई पापको मूर्खता र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट मुक्त गर्नुहुन्छ।
यही प्रेरित कारणले येशू ख्रीष्टलाई क्रूसमा टाँगिएको व्यक्तिको रूपमा प्रचार गरिरहनुभयो जो परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको ज्ञान थियो। क्रसमा आउनुहोस् र यसको शक्ति र बुद्धिमत्ता आविष्कार गर्नुहोस्।
रवि जकारियाज द्वारा